आगन्तुकलाई आफै चिया पकाएर स्वागत गर्छन् परराष्ट्रमन्त्री खड्का ! – Nepal Press
२०७८ मंसिर ९ गते १५:५४
काठमाडौं । मन्त्रीले घरायसी काम गरेको कमै सुन्नमा पाईन्छ । धेरैजसो मन्त्रीको घरमा घरायसी कामकाजमा खटिने कामदार राखिएको हुन्छ । यो कुनै नौलो कुरा भने होइन । तर, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का यो मामिला अपवाद देखिए ।
उनको दैनिकी घरमा बिहानै आउने कार्यकर्ता र आगन्तुकलाई चिया खुवाएर सुरु हुन्छ । यो दिनचर्याको कारण मन्त्री खड्का अहिले सामाजिक संजालमा चर्चामा छन् । केही वर्षदेखि नै खड्का स्वयमले आफ्नै हातले बनाएको चिया खुवाएर आगन्तुकको स्वागत गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा अर्थशाष्त्रमा विद्यावारिधी गरेका डा. खड्काले घरमा काम गर्ने मान्छे राखेका छैनन् । उनी खाना पकाउने लगायतका आफ्ना दैनिक कामहरू आफैँ गर्छन् । उनी मन्त्री क्वार्टरमा नभएर निवासमै बसोबास गर्छन् ।
उदयपुरबाट निर्वाचित सांसद खड्काले अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर ९ गते १५:५४